အယ်လ်ဂျီးရီးယား: ထောင်ချခြင်း Tayeb Louh နောက်ဆုံးတရားမျှတမှုဝန်ကြီး Abdelaziz Bouteflika - JeuneAfrique.com - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကုမ္ပဏီ "အယ်လ်ဂျီးရီးယား: ထောင်ချခြင်း Tayeb Louh နောက်ဆုံးတရားမျှတမှုဝန်ကြီး Abdelaziz Bouteflika - JeuneAfrique.com
အယ်လ်ဂျီးရီးယား: ထောင်ချခြင်း Tayeb Louh နောက်ဆုံးတရားမျှတမှုဝန်ကြီး Abdelaziz Bouteflika - JeuneAfrique.com
ကျဆုံးပြီးနောက်အကျဉ်းထောင်မှ။ ဟောင်းများအလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီး (2002-2013) နှင့်တရားမျှတမှု (2013-2019), Tayeb Louh သူအစိုးရထဲမှာသူ့ယခင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အများအပြားပူးပေါင်းရှိရာအယ်လ် Harrach ထောင်ထဲမှာမှာကြာသပတေးနေ့ 22 သြဂုတ်လပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။
"သြဂုတ်လ 18 2019 ၏အဖြစ်, တရားရုံးချုပ်၏အများပြည်သူအစိုးရရှေ့နေအယ်လ်ဂျီယား၏တရားရုံး၏ရှေ့နေချုပ်ကနေလက်ခံသူကြီးစံချိန်များ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတရားရေးဟောင်းဝန်ကြီးဆန့်ကျင်အစပျိုး , ထိုဖျံ Tayeb Louh နှင့်ပညတ်တရားအားဖြင့်အပြစ်ပေးကိစ္စများတွင်ကနှိုင်းယှဉ်တခြားသူတွေရဲ့ဂိုးသမား, "သူ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်၏အကြိုအပေါ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သောတရားရုံး၏အစိုးရရှေ့နေအထွေထွေတစ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်, ဖော်ပြခဲ့သည်။
တရားရုံးချုပ်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ကြာသပတေးနေ့တနေ့လုံးကျွန်တော်ကြားလျှင်, Tayeb Louh များအတွက်ထိန်းသိမ်းထားရမန်ခဲ့ပါတယ် "ရုံး၏အလွဲသုံးစားမှု, တရားမျှတမှုအဆီးအတားတရားဝင်မိနစ်အတုမှလှုံ့ဆော်မှု, ဘက်လိုက်မှုမှလှုံ့ဆော်မှု။ " အဆိုပါလျှောက်ထားပြီးသား, ဇူလိုင်လအတွင်းတိုင်းပြည်ထွက်ခွာအပေါ်တစ်ဦးပိတ်ပင်မှုခဲ့သညျ။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှိမ်နင်းရေးတို့အတွက်ဗဟိုရုံး (OCRC) ထို့နောက်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအရပြစ်မှုများဘို့သူ့ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမဖွင့်ဘို့တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။
Bouteflika စနစ်၏ Cador
အဆိုပါသင်္ကေတအားကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနီးပါးခြောက်နှစ်များအတွက်တရားရေးဌာနခေါင်းနှစ်လုံးသောသူသည်မိမိကိုမိမိတစ်ဦးစွပ်စွဲအကျင့်ပျက်ခြစားမှုအမှု၌ကို လိုက်. တွေ့။ ဟောင်းများတရားသူကြီးနှင့်အောက်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (NPS) ၏သမ္မတဟောင်း, Tayeb Louh ပြည်နယ်၏ဦးခေါင်းကနေအစပျိုးခြင်းနှင့်ပါမောက္ခ Mohand နှင့် Issad အပျနှငျး, တရားစီရင်ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအပေါ်ကော်မတီထည့်သွင်း 1999 အတွက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအသင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အဘယ်သူ၏တွေ့ရှိချက်များကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Bouteflika အားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဘယ်တော့မှခဲ့ကြသည်။ "ငါသည်တရားသဖြင့်စီရင်၏လွတ်လပ်ရေးအတွက်မယုံကြည်ကြဘူး။ တရားမျှတရေး, ကသူစာချွန်လွှာလက်ခံရရှိသည့်အခါ "ဟုအဆိုပါ Rais ကြေညာခဲ့သည်, ငါပငျဖွစျသညျ။
အနောက်မျက်နှာမှ Tayeb Louh ၏မြင့်တက် - အဖြစ်အများအပြားဟောင်းတဦးဝန်ကြီးများနှင့်ပြည်နယ်၏အကြီးတန်းအရာရှိတွေ - သူအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနှင့်လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအစုစုကြောင့်အမွေရသည့်အခါဇွန်လ 2002 အတွက်စတင် ဒါဟာနီးပါးဆယ်နှစ်သို့ပွေးလေ၏။ သမ္မတစက်ဝိုင်းအနီး, သူတရားရေးမော်ရိုကိုရယူနေဖြင့်စက်တင်ဘာလ 2013 အတွက်ရာထူးထ။ ၎င်း၏မစ်ရှင်? အပါအဝင်အစိုးရအတော်ကြာအဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သည့်အတွက်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအမှုပေါင်းသော့ခတ် Chakib Khelil စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနဟောင်းဝန်ကြီးအတွက်တရားစွဲ ရေနံကုမ္ပဏီ Sonatrach ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအများအပြားအရှုပ်တော်ပုံ.
အားလုံးအထက်တွင်သူ prevarication မှတ်တမ်းများနှင့်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲစက်ဝိုင်းနီးစပ်သူစီးပွားရေးသမားများမှာပါဝင်နေတဲ့ဝန်ကြီးတွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့အဲဒီ Tayeb Louh ယခုသူ့ကိုကဲ့သို့တူညီသောထောင်ထဲမှာ share ကြလိမ့်မည်ထွက်ပြေးတာဝန်ခံဖြစ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ညီလာခံ Abdelaziz Ziari သမ္မတဟောင်းပြုလုပ်ဖို့တာဝန်မစ်ရှင်အကြောင်းကို Louh ဆန့်ကျင်သံသယအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ "ငါသည်အစိုးရအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူတရားမျှတမှုဝန်ကြီး (2002 အတွက်မိုဟာမက် Charfi) ကဝန်ကြီးဖြစ်နေဆဲဒါကြောင့်သူကအံဆွဲထဲမှာ Chakib Khelil file ကိုထားဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ Charfi "စကားပြောနိုင်သည် အားလုံးအယ်လ်ဂျီးရီးယား (ည TSA) အကြောင်းဧပြီလ Ziari site ကိုအတွက်အတည်ပြု.
Louh Charfi ဖြင့်အစားထိုးခံရဖို့စက်တင်ဘာလ 2013 အတွက်အစိုးရအနေဖြင့်ဖြုတ်ချသည့် Sonatrach ကိစ္စများတွင် Chakib Khelil exonerate ရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ Louh ဒါသည်သူ၏နောင်တော်ပြုပါရန်ငြင်းဆန်အလုပ်ကိုပြု၏။ နောက်ကျောအယ်လ်ဂျီးရီးယားအတွက် 2016 Chakib Khelil အတွက်သူ့ကိုသြဂုတ်လ 2013 အတွက်သူ့ကိုဆန့်ကျင်ထုတ်ပေးထားတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖမ်းဝရမ်းရရှိခဲ့ပြီးသောစွဲချက်များရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်တရားရေးဆိုင်ရာ Tayeb Louh အောက်မှာကြောင်း ဟောင်းတဦးရှေ့နေချုပ်အယ်လ်ဂျီယား, Belkacem Zeghmati, Khelil နှင့်သူ၏မိသားစုဝင်များဆန့်ကျင်သြဂုတ်လ 12 2013 တရားစွဲမှုအတွက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သောအဆိုပါအလွန်တဦးတည်းပယ်ချခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါသက်သေ Louh နီးစပ်သူဒါမှမဟုတ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲစက်ဝိုင်းအတွင်းအများအပြားအကြီးတန်းအရာရှိများခြိမ်းခြောက်ကြောင်းအကျင့်ပျက်ခြစားမှုရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏အကောင့်အခြေချရန်တာဝန်ခဲ့သည်။ အခြားအမြီးအမောက်, ထို Zeghmati, ယုတျညံ့နဲ့စင်ပေါ်ဖြစ်ပါသည် ပြန်လည်နှင့်ယခုတရားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ပါသည်ခဲ့သည်.
သူကတစ်ဦးသံလက်တရားရေးဦးစီးဌာနနှင့်အတူဦးဆောင်သည့်ထိုအချိန်တွင် Tayeb Louh တနေ့နိုင်ငံတော်သမ္မတ Bouteflika မှအောင်မြင်ရန်အတွက်ရည်မှန်းချက်ခိုလှုံခွင့်။ မိမိအနည်းဗျူဟာ? အဆိုပါ FLN အတွင်းကွန်ရက်များချဲ့ထွင်သူတစ်ဦးထင်ရှားတဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုလျော့။ Bouteflika သူ့ကိုထက်အခြားသူတစ်ဦးဦးကသူ့အိမ်ခြံမြေဖို့တောင်းဆိုနိုင်သည်ကိုသည်းခံဘယ်တော့မှထားပါတယ်, Tayeb Louh ဟာနည်းနည်းမှာ champing ခဲ့တာ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 22 ၏တော်လှန်ရေး, ကြောင်းနုတ်ထွက်ဖို့လူနာZéraldaသတိပေးခံရနှင့်အညီ, သူကနှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်အုပ်ချုပ်ဖို့အားကိုးရသောပေါ်တွင်စနစ်၏တည်ဆောက်မှုအရှိန် Tayeb Louh ၏ကံကြမ္မာကိုတံဆိပ်ခတ်, ဧပြီ 1er 2019 အပေါ်သူ၏တာဝန်အားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Tayeb Louh ကွဲပြားခြားနားသောဖိုလ်ဒါထဲမှာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများသံသယရှိယခင်ကအယ်လ်ဂျီယားအယ်လ် Harrach ထောင်ထဲမှာအဖမ်းခံရသည်တဆယ်ကိုယခင်ဝန်ကြီးများ, ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Enam (စာတစ်စောင်) ကို entry ကိုညှိနှိုင်းရှင်ပေါလု Biya တစ် namesake
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်4,484